China Ethyl Ethanol ifektri abakhiqizi | Zhongrong
I-Ethanol, eyaziwa ifomula yamangqamuzana i-C2H5OH noma i-EtOH, inguketshezi olungenambala, obala, oluvuthayo futhi olushintshashintshayo.I-Ethanol enengxenyenamba yesisindo engaphezulu kuka-99.5% ibizwa nge-ethanol engenamanzi. I-Ethanol uhlobo lotshwala, luyisithako esiyinhloko sewayini olwaziwa kakhulu njengotshwala, luwuketshezi oluvuthayo nolungashisi olungenakubala ekamelweni lokushisa, ingcindezi yasemkhathini, isixazululo sayo samanzi sinephunga elikhethekile, elimnandi, futhi liyacasula kancane.I-Ethanol incane kakhulu kunamanzi futhi ingancibilika ngokuvumelana noma ngasiphi isilinganiso. Iyancibilika emanzini, i-methanol, i-ether kanye ne-chloroform.Ingancibilikisa amakhompiyutha amaningi wezinto eziphilayo namanye amakhemikhali angaphili.
Igama: i-ethanol engenamanzi, utshwala obungenamanzi
Ifomula yamolekyuli: CH3CH2OH ， C2H5OH
Umkhiqizo: Ubuchwepheshe beZhongrong
Umsuka: ITangshan, uHebei
CAS cha. : 64-17-5
Isisindo samangqamuzana: 46.06840
Ubuningi: 0.789 g / mL (20 ℃)
Ukucaciswa komkhiqizo: I-GB / T678-2002 ebangeni eliphezulu
HS Ikhodi: 2207200010
Imininingwane yokupakisha: umgqomo / inqwaba (ithani)
Izakhiwo zomzimba nezamakhemikhali
I-ethanol inokusetshenziswa okuningi. Okokuqala, i-ethanol ibalulekile kuphela, isetshenziswa kakhulu kwezokwelapha, upende, imikhiqizo yenhlanzeko, izimonyo, uwoyela neminye imikhakha.
Okwesibili, i-ethanol yinto ebalulekile eyisisekelo yamakhemikhali eluhlaza, esetshenziselwa ukukhiqiza i-acetaldehyde, i-ethylamine, i-ethyl acetate, i-acetic acid, njll., Futhi ithola abalamuli abaningi bemithi, udayi, upende, amakha, iraba lokwenziwa, okokuhlanza, i-pesticide nokunye Okwesithathu, isisombululo esingu-75% se-ethanol aqueous sinamandla amakhulu okubulala amagciwane futhi siyisibulala-magciwane esivame ukusetshenziswa ekwelashweni. Ekugcineni, efana ne-methanol, i-ethanol ingasetshenziswa njengomthombo wamandla. Ngo-2017, iminyango eyehlukene kanye namakhomishini eChina ngokuhlanganyela bakhipha izinqubomgomo ezifanele zokukhuthaza ukusetshenziswa kukaphethroli ophethiloli owenziwa ezweni lonke ngasekupheleni kuka-2020.
Hlela ukukhiqizwa ngokuhambisana ngokuqinile nezinga lebhizinisi le- "Anhydrous ethanol (Q / RJDRJ 03-2012)".
Langaphambilini Izicucu eziyi-150 Utshwala / iHyamine Sula
Olandelayo: I-Ethyl Acetate （≥99.7%）